Myanmar Book Aid & Preservation Foundation Testimonials
“The Story of Htet Wai Yan” by Ye Myint Kyaw, Open Mind Library
In partnership with Ooredoo, Myanmar Book Aids and Preservation Foundation aka MBAPF has donated6Easy Book Laptops and 40 GB internet per month to our library. We are very grateful that and delighted that we would now be able to invite experts to conduct free computer and internet courses for students and parents from the community. We wish that MBAPF grows more to support libraries and contribute more to educational works.
MIL Trainees’ Feedback of MCDC Maubin
အိပ်မက်သစ် စာကြည့်တိုက်ကို စတင်တည်ထောင် ခဲ့သည့်ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်တော်တို့ သိမ်ဇရပ်ရှိ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ စာပေချစ်မြတ်နိုးစာဖတ်သူများ စာပေကိုလိုအပ်သလို လွယ်ကူစွာလေ့လာနိုင်ရန်နှင့် သိမ်ဇရပ် အနာဂတ် ကလေးငယ်များအား စာဖတ်ခြင်စိတ်ရှိလာအောင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန် ရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရည်ရွှယ်ချက် အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ် အိပ်မက်သစ်မှာ နေစဉ် စာဖတ်သူများ စာအုပ်ဌားသူများ ဂျာနယ်လာဖတ်သူများ ကစားကွင်းတွင် လာရောက်ကစားသူများ tabletသုံးသူများနှင့် နေစဉ် စာကြည့်တိုက်သို့လာရောက်သူ ၁၅၀ခန့်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ အိပ်မက်သစ် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဒီထက်ပိုသောအောင်မြင်မူမျိုးရည်မှန်ချက်မျိုးမလိုချင်ခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့ ဆရာမမြတ်စန်းငြိမ်း ဒေါက်တာသန့်သော်ကောင်း ဆရာမဒေါ်ဝင်း တို့နဲ့ဆက်သွယ်မိတဲ့အခါ ကိုမောင်မောင်စိုးလှုပ်ရှာမူများကိုတွေ့ရတဲ့အခါ သူတိုဖိတ်ခေါ်တဲ့သင်တန်းများတတ်မိတဲ့အခါ အိပ်မက်သစ် အဖွဲ့ဝင်းများသည် သိမ်ဇရပ် အနာဂတ် ကလေးငယ်များတွက် ဒီထက်ပိုသောအောင်မြင်မှုများ ရည်မှန်းချက်များ မထားချင်လို့မရပါတော့ပါ။ ဆရာ/မများသည် အောင်မြင်နေသောစာကြည့်တိုက်များကို ပို၍အောင်မြင်အောင်ကူညီပေးပါသည်။မအောင်မြင်သောစာကြည့်တိုက်များ ဖွင့်လှစ်ရန်ကြိုစားနေတဲ့ စာကြည့်တိုက်များ ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်အောင် သင်တန်းများဖွင့်၍သော်လည်ကောင်း စာအုပ်များလှူဒါန်း၍သော်လည်ကောင်း tabletများပေး၍ စာကြည့်တိုက်ကို ကလေးများ စိတ်ဝင်စားအောင် ရပ်ရွာရှိမိန်ကလေးငယ်များကို ထူးချွန်ထက်မြတ်သော ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ ဖြစ်လာအောင် သင်တန်းများဖွင့်၍သင်စေပြီး အထောက်ပံ့များပေးလျှက် စာကြည့်တိုက်များ တိုးတတ်အောင်ကူညီပေးနေပါတယ်။ ဆရာ/မများနှင့် ဆက်သွယ်မိသော ကျွန်တော်တို့ အိပ်မက်သစ်သည်လဲ စာပေသာမက စာကြည့်တိုက်သို့ လာရောက်သူများထဲမှ နည်းပညာစိတ်ဝင်စားသူများကို သင်တန်းများဖွင့်၍ သင်ပြပေးနိုင်ရန် ကွန်ပျူတာခန်းကိုဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ် MBAPFမှသင်တန်းများကိုလဲ ကွန်ပျူတာခန်းတွင် စနစ်တကျ သင်ကြားပေးနိုင်ရန်တွက် ရည်ရွယ်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ MBAPFဆရာ/မများကြောင့် အိပ်မက်သစ်၏အောင်မြင်မှုရည်ရွယ်ချက်လဲ တဆင့်မြင့်တက်ကာ စာပေသာမက နည်းပညာ ထူချွန်ထက်မြတ်သော ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ ထွက်ပေါ်ရေးကိုပါ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
( အိပ်မက်သစ် စာကြည့်တိုက်)
Myanmar Book Aid and Preservation Foundation | © 2017 | Facebook